भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस् - SudurSanchar
।थपियो बज्रपात: विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेखकोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । भिल्लाभिसेन्सियोबाट ताराइरा जाँदै गरेको डाउग्लास डीसी–थ्री विमान दुर्घटनामा परेको हो । ३० सिट क्षमताको विमान प्राविधिक खरावीका कारण दुर्घटना भएको हो । विमानमा चालकले प्राविधिक समस्या आएको जानकारी दिएलगत्तै विमान सम्पर्क विहीन भएको थियो । त्यसको एक घण्टापछि विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पत्नि परपुरुषसँग लागेपछि डि;प्रेशनमा गएका पुरुषलाई जाँच्ने डाक्टर नै पत्निका प्रेमी भएको पाइयो, ति डाक्टर प्रेमीले से; क्स गर्दा खिचेका तस्विर र भिडियो देखेर पति ढले
काठमाडौं। श्रीमतीको अ;वै;ध स;म्ब;न्धका कारण तनाब बढ्दै जाँदा डि;प्रेसनको शि;का;र भएका एक व्यक्ति उपचारको लागि जुन डाक्टरकहाँ गए त्यही डाक्टरसँग नै श्रीमतीको अ;वैध स;म्बन्ध भएको खुलेको छ । अमेरिकाको ओरेगनका ती व्यक्तिले अहिले ती डाक्टरसँग २.९ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अदालतमा मुद्दा हालिदिएका छन् । द बेन्ड बुलेटिनका अनुसार पिर्सन टोन नामका ४७ वर्षका ती व्यक्तिले डा. रोनाल्ड रोसेनविरुद्ध ‘व्यवसायिक लापरवाही’को आरोप लगाउँदै मुद्दा हालिदिएका हुन् ।
टोनका अनुसार उनी, उनकी श्रीमती र उनका दुई छोराछोरी डा. रोसेनका बिरामीहरु थिए । २०१५ देखि २०१८ सम्म उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच डा. रोसेनले नै गर्थे । यही अवधिमा डा. रोसेनको टोनकी श्रमितीसँग अ;वै;ध सम्बन्ध सुरु भयो । श्रीमतीको अ;वै;ध सम्बन्धका कारण सम्बन्धमा समस्या आएपछि टोन डि;प्रेसनको शि;का;र भए र नोभेम्बर २०१८ मा उपचारको लागि डा. रोसेनकहाँ नै गए । डा. रोसेनले टोनलाई गाँ;जा खा;न सिफारिस गरे र श्रमितीसँग स;म्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने विषयमा काउन्सिलिङको लागि समेत बोलाए ।